देशलाई कस्तो प्राविधिक शिक्षा चाहिन्छ ?
देशलाई कस्तो प्राविधिक शिक्षाको खाँचो छ ? यसबारेमा एउटा कार्यदल बनाएर अध्ययन हुँदैछ । यो कार्यदलमा नेकपाकै झोलेहरुलाई राख्न लागेकाले कार्यकर्ता कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेतिर मात्र सोचिने खतरा छ ।
निश्चय नै शिक्षानीतिको परिमार्जन जरुरी छ । परिमार्जनका लागि गठन हुने कार्यदलमा पार्टीसोचबाट माथि उठेका, उठ्नसक्ने र देशको आवश्यकता बुझेका बुद्धिजीवीलाई जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुनेछ । अन्यथा अहिलेकै जस्तो प्रमाणपत्रधारी जनशक्ति उत्पादन हुने र शीपमूलक नहुने झण्झटमात्र बढ्नेछ ।
यो युग नै हातमा शीप हुने शिक्षाको हो । त्रिविले हिलोमा कार्पेट बिछ्याएर प्रधानमन्त्रीलाई जसरी स्वागत गरेको थियो, प्राविधिक शिक्षाको कमी र चाकरी गर्ने प्रवृत्तियुक्त शिक्षाको नतिजा हो । हात हातमा शीप भएका भए आज देशमा विदेशीले आएर रोजगारी पाउने र स्वदेशी युवा खाडीमा भड्किनुपर्ने थिएन । यही अव्यवस्था सुधार्नका लागि प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिन जरुरी छ । अवको शिक्षानीतिले बेरोजगार शिक्षित उत्पादन गर्ने होइन, हात हातमा शीप भएका युवा जनशक्ति उत्पादन गर्नतिर ध्यान दिन जरुरी छ । देशको विकास तवमात्र हुनेछ ।
अवको समय प्रविधिको हो । विज्ञानको हो । यो प्रविधिको युगलाई हाँक्नसक्ने युवा उत्पादन गर्ने शिक्षानीतिले मात्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार पार्नसक्छ । प्राविधिक शिक्षा बुझेका ज्ञाता, विज्ञहरुलाई शिक्षानीतिको खाका तैयार गर्ने जिम्मेवारी दिन सरकारले चुक्नु हुन्न । अहंकारले धेरै कुरा बिग्रिसकेको छ । लोकप्रिय सरकारप्रति जनताको तीतो अनुभूति भइरहेको छ । ऐतिहासिक सरकारले ऐतिहासिक काम गर्नुपर्छ । तव न नेकपा । नेकपाले नेपाल बनाउने मार्गचित्र कोर्ने अहिले नै हो । डेढवर्षको अवधिमा सरकारले जे जति गल्तीकमजोरी देखायो, आगामी दिनमा ती कमजोरी सुधार हुनुपर्छ, जनताको विश्वास जित्ने प्रकृतिका निर्णय कामहरु हुनुपर्छ । अव पनि गल्ती गर्नु भनेको ओह्रालो झर्नु हो ।